तलेजुको हार कसरी पुग्यो सिकागो ? – Maitri News
तलेजुको हार कसरी पुग्यो सिकागो ?
काठमाडौँ । सन् ७० को दशकदेखि हराइरहेको मल्लकालीन समयदेखि नेवार समुदायले इष्टदेवीका रूपमा पुज्दै आएको तलेजु भवानीको गलामा रहने हार नेकलेस अमेरिकाको सिकागोमा भेटिएको छ ।
तलेजु भवानीका मूल पुजारी उद्धवमान कर्माचार्यका अनुसार झन्डै ४ सय वर्षअघि संवत् १६९८ मा राजा प्रताप मल्लले तलेजु मन्दिरमा पूजा गर्ने चलन बसाएका थिए ।
२०२७ सालमा तलेजुको गरगहना छानबिन तथा लगत निर्धारण भनेर अध्ययन गरिएपछि तलेजु हारलगायतका गरगहना उठाएर लगिएको थियो । गरगहना छानबिन गर्ने भनेर आएको टोलीमा राजदरबारका सदस्यसहित गुठी संस्थान, अञ्चलाधीश कार्यालय, संस्कृति मन्त्रालयसमेतका अधिकारी थिए । यहाँ रहेका ३ सयभन्दा बढी गरगहना, प्राचीन भाँडाकुँडा र सम्पत्तिको अभिलेख लिखत राखिएको थियो । झन्डै एक महिना लगाएर तलेजुका सबै सरसम्पत्ति उठाइएको थियो । तर, ती सामान र त्यसको लगत कहाँ लगिएको हो, कहिल्यै थाहा भएन ।
तलेजु भवानीको हार सिकागो म्युजियममा रहेको जानकारी आएपछि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित आर्ट–क्राइमकी प्राध्यापक इरिन एल थोम्सनले यो सम्पदा चोरीको नैतिक जिम्मेवारी सिकागो म्युजियमले लिनैपर्ने बताइन् । ‘यो सम्पदा जुन २२, १९७६ संवत् २०३३मा जेम्स डब्लु एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फ दम्पतीले खरिद गरेको र सन् २०१० मा सिकागो म्युजियमलाई प्रदान गरिएको विवरण म्युजियमकै सूचीपत्रमा पनि उल्लेख छ,’ थोम्सनले भनिन्, ‘सन् ७० को दशकदेखि हराइरहेको यो नेपाली बहुमूल्य सम्पदा उत्पत्तिको मुलुक कन्ट्री अफ ओरिजिनलाई फर्काउनेबारेमा भने म्युजियमले केही बोल्न चाहेकै देखिँदैन ।’
Previous Previous post: चीनले बनायो संसारकै उचाइमा बुलेट रेल
Next Next post: चीनको बीआरआईलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले प्रस्तुत गर्‍यो बी३डब्ल्यू योजना